Waxaanu ka caawinaa Dadka, Shirkadaha iyo Hay'adaha inay xaqiijiyaan wax aan macquul aheyn. Sidee?
Iyadoo koorsooyin tababar ah oo loogu talagalay barista tabaha fikradaha si ay u ogaadaan wax aan suurtagal ahayn nolol maalmeedka. Ama sameynta dhacdooyin isgaarsiineed oo aan macquul ahayn oo adiga kugu habboon.
XIDHIIDHA IYO BULSHADA
Masters of Magic waxay abuureysaa bandhigyo nololeed oo habaysan, si loo daboolo baahida isgaarsiinta macmiilka. Bandhiggu wuxuu noqonayaa hab lagu gudbiyo fariimaha iyo farshaxanka, calaamadda isgaarsiinta.
Dareemadu waxay la xiriirtaa fanaan kasta.
Dareen kasta oo qiimo leh ee astaanta.
Ay ogaadaan wax aan macquul aheyn waxay noqon kartaa. Oo Masters of Magic bara habka ay ku guulaystaan. ka balliga isku duba Psychiatrist Matthew Rampin horumariyo, fikir Strange® Philosophy, ayaa saldhig adag oo cilmiyaysan oo doonaya farriimo waxbarashada gaadhsiiyey marayo daqiiqado dhabta ah ee show ah, ad hoc baahida macaamiisha.
Masters of Magic waxay uuraysatay, soo saartay oo ay garatay dhammaan barnaamijyadii weynaa ee cajaladda ahaa ee Talyaaniga ku baahiyay Rai, Mediaset iyo Sky ee sanooyinkii ugu danbeeyay ee 10 Masters of Magic Magic ayaa had iyo jeer dhaaftay shareecada shabakada, taas oo xaqiijinaysa guusha falsafadiisa : cusboonaysii millennia farshaxanada suugaanta si loo abuuro muuqaalo gaar ah iyo kuwo cusub. Soo-celinta cajiibka ah ee dadwaynuhu waxay muujinaysaa in markii ugu wanaagsan ee la soo bandhigo, ay la yaaban tahay oo soo jiidatay.
KA HELAA SIDA!
CNH - Isbedelku waa awood
TABABBARKA - MASUULKA CAAFIMAADKA MAGAALADA - Isbedelku waa awood
In ka badan Billodka 1 ee sawirada internetka ee muuqaal gaar ah
LIVE EVENTS - Bandhig weyn
World Championship Championship, abaalmarinta caalamiga ah ee ugu taajirsan by Magacaaban xirfadlayaasha ah ee ...
IULM - Furitaanka sanad dugsiyeedka
Walter Rolfo, oo ah guushii guulaha tababarka ee sanadaha ugu dambeeyay ee 6, wuxuu ahaa ...
WAXBARASHADA - Hadal hadaleed
3 talooyin qaas ah oo talyaani ah oo muujinaya marxalad udhaxeysa riyadii iyo farshaxanka
Munaasabadaha LIVE - Dhacdooyinka Shirkadda
Waa suurtagal ... si loo abuuro fiidkii kaas oo ganacsiga muhiimka ah ee shirkadu uu yahay walxaha ...
MAWA - Habeen aan caadi ahayn
Waa suurtogal ... in lagu soo galo fiidkii iyo hal mawduuc ah heer sare ee a ...
HESHIISKA WAXYAABAHA LAGA HELAYO
Ma aqaan magaca isticmaalaha?
Helitaanka aagga loo qoondeeyay si aad u ogaato dalabyada ganacsiga